Ezine zeendebe zeKhadi leTarot - Khetha Uphawu
Ezine zeendebe zeKhadi leTarot
Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x Ikhadi leTarot: Ezine zeendebe
Amagama angundoqo: Ukuma, Ukubotshwa, Ukungalingani
Isiqinisekiso: Ndibamba zonke iimvakalelo zam.
Ezine zeendebe Intsingiselo
Xa sidinwa kukunxibelelana, iindebe ezine zisikhumbuza ukuba lixesha lokuba sodwa, sicamngce, sithi hayi kwizimemo zepati entsha okanye iindibano zentlalo, kwaye siguqukele kuthi ngokuZithanda. Eli likhonkco elibalulekileyo kulandelelwano olukhulu lwezinto abaninzi ababonakala bephoswa endleleni, kwaye linokukhomba kwisithukuthezi kunye namaxesha apho sinyanzeliswa lusizi okanye uxinzelelo lwangaphakathi ukuba sibe sodwa, silahlekile, sivalelwe okanye sidakumbile. Ngokubanzi, eli likhadi lokucamngca, umthandazo kunye nokuphumla, ukunxibelelana kwethu buqu kunye neNdalo. Kusikhumbuza ukuba sifuna ixesha lokucoca zonke iimpembelelo zangaphandle kwaye sikhulise imida yethu yeemvakalelo ukuba sodwa. Isalatha ekudodobaleni kweemvakalelo, amaqhina kwixa elidluleyo esingenako ukukhululeka kulo, nolwalamano olwasigcina singxwelerhekile ixesha elide. Kuyinxalenye yendalo yomjikelo weemvakalelo, kuba umnqweno wethu wokunxibelelana ufanele ulandelwe ngumnqweno wethu wokuzahlula, ukulala, nokuzinyamekela emva kweeyure, iintsuku, okanye iinyanga zokunyamekela abanye.
Olu ayilulo kanye uphawu lokumanyana, nangona lubonisa unxibelelwano olucacileyo lweemvakalelo kufundo lothando. Nangona kunjalo, umntu akabonakali enomdla kunxibelelwano ukuqala, mhlawumbi usadityaniswe nomntu owayesakuba ngumthandi okanye lowo ubalekileyo. Uthando olutsha lufuna ukukhululeka kumaqhina amadala kunye nomthwalo obambe unyawo lwethu kwixesha elidlulileyo. Kwabo sele bebandakanyekile lo mqondiso wokuba eminye imida igqitywe kwaye imfuneko yelo xesha kukuhlukana ixesha elide ngokwaneleyo ukugqiba apho umntu oyinyaniso iphela kwaye enye iqala.
Ezine zeendebe likhadi lenkuthazo elahlekileyo kunye nexesha elifunekayo lokuphumla. Inokuthi ibhekisele kwisidingo sethu sokuthatha ikhefu kunazo naziphi na iiprojekthi ezinkulu eziqalayo nangaliphi na ixesha kungekudala. Ibonisa imithetho eyaphukileyo okanye imida egqitywe endleleni, kwaye inokuthetha ngezikhundla ezithathwe ngabanye nangona thina besibafanele. Ukunganyaniseki okanye ukungabikho kokusesikweni kuyasixaka kwaye asazi ukuba masihambe phi ngokulandelayo, ke kufuneka sinxibelelane noThixo, iNdalo kunye nezikhokelo zethu zomoya ukubona ukuba kufuneka senze utshintsho olukhulu kwihlabathi lobuchwephesha ebesizama ukulakha. Ubudlelwane nabantu esisebenza nabo buchitha amandla ethu, abunamdla okanye abunamveliso okwangoku.
Umntu udinga ukuvuselelwa okunzulu kunye neZine zeeNdebe kufundo lwezempilo. Eli khadi lisixelela ukuba siphumle, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba sicamngce, siphumle i-spasm kwizihlunu zethu kunye nomzimba wethu wonke, kwaye sinikezele kuzo zonke ezo zisukelo ezinomdla eziye zasigcina sivutha kodwa zingasigcinanga sisempilweni. Kusisikhumbuzo kunokuba amandla ethu kufuneka agcinwe, alungelelaniswe, kwaye asetyenziselwe ukucoca inkqubo yethu endaweni yokuyisasaza macala onke kwimiba engafanelekanga njengempilo yethu. Umntu usenokuba sentlungwini, ala uncedo lwezonyango, kwaye engayiqondi into efunwa ngumzimba wakhe. Ukwala okanye ukudodobala kweemvakalelo kunokukhokelela ekubeni izinto zingcwatywe kummandla wethu wokwenyama kunokuba ziconjululwe ngokweemvakalelo apho beziqale khona.
Ezine zeendebe zibuyiselwe umva
Isikhundla esitshintshileyo seZine zeeNdebe kukwala ukujongana nehlabathi lethu langaphakathi kunye nezithunzi zalo. Ibonisa imfuneko yokuzifihla kwingxaki ebuhlungu kwaye inzulu, kunye notyekelo lokuyiprojekthi kwabanye abantu endaweni yokuyifumana ngaphakathi. Xa ukuhlala wedwa kunye nokulala okuqinileyo kusibiza akufanele sinqabe, kuba zonke iintlobo zemiba ye-physiology kunye neemeko ezingapheliyo ziphuma kolu hlobo lwamandla amileyo kunye noxinzelelo xa bengahlonitshwa onke amanyathelo endlela. Bulela kwiphysiology yakho kwaye ulandele izikhokelo zayo naphi na apho zikhokelela khona, nokuba oku kuthetha ukuba ungenzi nto de intliziyo yakho ixole.
Ezine zeendebe Time Line
Ixesha elidlulileyo - Ngeendebe ezine ngaphambili, kufuneka sizibuze ukuba besinexesha elaneleyo na ngokwethu ukuba sizihlaziye kwaye siphilise okanye siye sala inkxaso kuba besizama ukuzifihla kwizithunzi zethu. Izinto ezibangela ukuba zitsalwe kwaye sibonile ukuba iqabane lethu okanye abantu abasondeleyo banokusichaphazela njani kwaye zeziphi iipateni abazixhokonxileyo. Kufuneka siqaphele iimpazamo esifunde kuzo kunye nezo sityhale phantsi kombhoxo ukuba sijongane nazo namhlanje.
Nikela - Eli khadi lixhasa ukuba wedwa kunye nexesha lokwakha ngokutsha iingcingo zethu kwaye sicinge ngendawo yobuqu kunye nemida ethe yathotywa. Ayizi okwangoku naziphi na iiprojekthi ezintsha zobudlelwane, kuba siye saxakwa ngokweemvakalelo kwaye sidinga ukuphinda sichaze izinto, sibone indlela umbono wethu ekufuneka utshintshe ngayo, kwaye sifumane intsingiselo yayo yonke into ebisenzeka ngaphambi kokuba siqhubeke. Ukuba siyalutyeshela olu bizo lweemvakalelo, sinokugqiba ekubeni sivale iintliziyo zethu kwaye sisukele usukelo ngenxa nje yabo endaweni yokonwabela ukukhwela.
Ikamva - Sicinga ngekamva kunye neendebe ezine ezibekwe kuyo, iinzame zethu namhlanje zinokuthi zingabikho kwibhalansi kwaye zibaxo, nangona singaboni ukuba zikho okwangoku. Kufuneka sizibuze amaxesha ngamaxesha ukuba iingxaki zethu zineenjongo okanye silandela nje ukuhamba kweemvakalelo zexesha elidlulileyo. Sisenokuba silandela ukhetho lomnye umntu olungakhange luhambelane nentliziyo yethu ixesha elide. Eli khadi liluphawu olunamandla lokuba sinomntu osondeleyo osithezela amandla endaweni yokuba asinike kangangoko besimnika.
I-Capricorn Khetha Uphawu Iiary I-Scorpio Umhlaza